Global Voices teny Malagasy » Ireo noresahan’ny bilaogy Boliviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jolay 2018 4:17 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Miranah
Mila porofo ve hoe vondrom-piarahamonina tsy mitsaha-mitombo ny tontolon'ny bilaogy Boliviana? Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny bilaogy Boliviana listserv, nanambara ny fanambadiany atsy ho atsy sy ny andraikitra lehibe horaisin'ny bilaogy amin'ny andro malaza i Sebastian Molina, iray amin'ireo atidoha nikotroka ny andian-bilaogy Mundo Al Revés . Manana ny bilaoginy manokana antsoina hoe Libertad  ny fofom-badiny Annelissie Arrázola ary toa manana ny bilaoginy manokana ihany koa antsoina hoe Ágora  ny rain'ny mpampakatra, Carlos Hugo Molina izay. Anisan'ireo vahiny nasaina i Hermany Terrazas manoratra ao amin'ny Carpe Diem  sy Vittorio Cattoretti sy ny bilaoginy momba ny baolina kitra Con Pelotas . Hoy i Molina nanoratra;
Taorian'ny mailaka orizinaly (niandohana), nanaraka ireo andiana valinteny firarian-tsoa. Maro no nilaza hoe “na dia tsy fantatro manokana aza ianao, saingy…”, sy hoe “Tsy nanana fahafahana nihaona taminao mivantana aho, saingy….”, mbola nanasokajy an'i Molina ho namana akaiky tamin'ny fahafantarana azy tamin'ny alalan'ny bilaoginy manokana sy ny asa nataony hampandrosoana ny fibilaogina izy ireo. Nanoratra andian-dahatsoratra sy fampanantenana tao amin'ny bilaoginy, Plan B  amin'ny ho avy akaiky i Molina. Maro amin'ireo mpirary soa no avy amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena, ao La Paz, Cochabamba, Santa Cruz ary misy mihitsy aza ireo hafa monina any am-pitandranomasina.
Ny bilaogy ao amin'ity vondrom-piaharamonina ity dia mbola miorina ao amin'ireo tanàndehibe telo any Santa Cruz, La Paz ary Cochabamba, raha ny sasany kosa miposaka any El Alto. Na izany aza, matetika vokatry ny olona iray manambara ny blaoginy amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny toeram-pihaonana foibe ny fahitana bilaogy vaovao. Matetika koa nefa tsy izany, ny pejy Blogs Bolivia  izany tranonkala foibe izany.
Tamin'ny lahatsoratra vao haingana indrindra tao amin'izany pejy izany, nandinika ny votoaty mifandray amin'i Bolivia mikasika ireo fiaovana roa izay manampy amin'ny famokarana bilaogin-dahatsary, You Tube sy Google Video i Miguel Esquirol. Misy horonantsary vitsivitsy ihany ao amin'ireo tranonkala izay mitantara momba ny fizahantany, ny vakodrazana ary ny lahatsary iray momba ny sakafo Boliviana. Amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'izany, manasongadina ny fitomboan'ny isan'ny fanafarana sakafo biôlôjika Boliviana  ao amin'ny Journal of Business and Politics i Jonathan Olguin.
Indraindray ny fiainana dia tokony momba ny fanambadiana sy ny sakafo Boliviana ihany, saingy mitohy ny tontolon'ny zava-misy/politika ankehitriny. Manontany i Joaquin Cuevas: “Tokony ho henjana ny maha-filoha, sa tsy izany?” ary nampifanaraka izany tamin'ny sary fanazavana mampiseho ny filoha Evo Morales manonofy momba ny fiainany taloha fony izy mpiandry ondry . Manana fandravahana hafa momba ireo olana vao haingana tamin'ny Zotram-piaramanidina Boliviana, Lloyd Aéreo Boliviano ao amin'ny bilaoginy La Vida del Chico Larva  i Cuevas. Diso fanantenana tamin'ny korontana niainan'ny zotram-piaramanidina sy ny fitokonan'ny mpanamory fiaramanidina naterak'izany izay manome tsiny izany noho ny kolikoly sy ny fitantanana ratsy  ihany koa i Javier, araka ny nosoratany tao amin'ny bilaoginy Una Revisión de Todo un Poco.
Manoratra fomba fijery lalina sy mahaliana momba ny fitakiana ara-tantara amin'ny jeografian'i Bolivia sy momba ny fampiasana marika  i Boli-Nica. Alvaro Ruiz Navajas kosa tena manahy momba ny teritery ataon'ny governemanta vaovao MAS amin'ny Fitsarana Nasionaly misahana ny Fifidianana . Mijery ny hetsika vao haingana momba ny fananganana Antenimieram-panorenana, izay hisahana ny fanoratana indray ny Lalàm-panorenana Boliviana ny bilaoginy Off Topic .
Ao amin'ny bilaoginy Musicantos, miherika any amin'ny Febroary Mainty  i Edgar, izay nitranga telo taona lasa izay ary vokatry ny fifandonana marobe miavosa nandritra ny andro vitsivitsy. Nanjary navitrika tamin'ny ady ratsy nifanaovany ny polisy sy ny miaramila. Ireo mpanao hetsi-panoherana hafa kosa nanohitra ny tolo-kevitra fampiakarana hetra. Vokatr'izany, voalaza fa nisy ny fandrobana mieli-patrana ary maro no maty na naratra, anisan'izany ny sivily, ny polisy ary ny miaramila.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/18/123083/
 Mundo Al Revés: http://www.mundoalreves.com/
 Carpe Diem: http://carpediem.mundoalreves.com
 Con Pelotas: http://conpelotas.mundoalreves.com
 Plan B: http://planb.mundoalreves.com/
 Blogs Bolivia: http://www.blogsbolivia.blogspot.com/
 nandinika ny votoaty mifandray amin'i Bolivia : http://blogsbolivia.blogspot.com/2006/02/zapping-bolivia.html
 fitomboan'ny isan'ny fanafarana sakafo biôlôjika Boliviana: http://b2bolivia.blogspot.com/2006/02/uncovering-niche-market-bolivian.html
 sary fanazavana mampiseho ny filoha Evo Morales manonofy momba ny fiainany taloha fony izy mpiandry ondry: http://chicolarva.blogspot.com/2006/02/debe-ser-fregado-ser-presidente-no.html
 La Vida del Chico Larva: http://chicolarva.blogspot.com
 manome tsiny izany noho ny kolikoly sy ny fitantanana ratsy: http://tomorrow123.blogspot.com/2006/02/la-poca-y-el-lab.html
 fitakiana ara-tantara amin'ny jeografian'i Bolivia sy momba ny fampiasana marika: http://bolicarreras.blogspot.com/2006/02/bolivia-random-thoughts-on-evos-new.html
 teritery ataon'ny governemanta vaovao MAS amin'ny Fitsarana Nasionaly misahana ny Fifidianana: http://aruiznavajas.blogspot.com/2006/02/mas-intentions-and-their-first-purge.html
 miherika any amin'ny Febroary Mainty: http://musicantos.blogspot.com/2006/02/sobre-febrero-del-2003.html